Wzọ isii iji belata akwara mgbu mgbe arụchara ọrụ - Ọdịmma
Bestzọ isii kachasị mma iji mee ka uru ahụ gwụchaa Mgbe arụchara ọrụ
6 Best Ways Soothe Sore Muscles After Working Out
egwuregwu ntụrụndụ maka ndị okenye
Worked rụrụ ọrụ oké ọsụsọ na atụ ogho ụnyaahụ ma ugbu a ị nọ mmetụta ọkụ ahụ. Ouch. Nwere ike ikeleigbu oge na-egbu mgbu (DOMS)n'ihi na ihe mere ọbụna na-eje ije n'elu akwa mgbago ụlọ na-adị ka ezigbo ihe mgbu. Ma ọ bụ ezie na ụfọdụ DOMS bụ ihe a na-apụghị izere ezere (mgbe ị gbasiri ike mgbatị gị ma ọ bụ ịkụ mgbatị ahụ ike mgbe ogologo oge izu ike, dịka ọmụmaatụ), enwere ụzọ iji belata mgbaàmà ahụ. N'ebe a, ụzọ isii iji belata ihe mgbu ma mee ka mgbake gị dị ngwa.
Njikọ: Ihe isii onye nkuzi gị chọrọ ka ị kwụsị ime
Rie ma rinkụọ nke Ọma
Lee, anyị niile agaala klaasị ụtụtụ Sọnde wee kụzie onwe anyị site na ịtụ pakeki, akwa na mimosas abụọ na brunch. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ inyere ahụ gị aka ịgbake ngwa ngwa, onye nkuzi nke onwe gịLisa Reedna-atụ aro ka ị na-agbanye mmanụ ozugbo obere obere carbohydrates na protein na-arụ ọrụ. Ndị a bụ isii kacha mma oriri na ihe ọ drinksụ drinksụ na-enwe mgbe arụ ọrụ .
( Ọma : Ihe ị na-eri tupu ịme ihe, kwa. Iji hụ na ahụ gị na-arụ ọrụ kacha mma, lee nri nri isii na uru ndị ahụ na-akwado ịmị ọkụ ihe dị ka elekere elekere tupu ọsụsọ ọsọsụ gị.)
Gbalịa Fofụfụ Rolling
Youkwesighi ịbụ onye egwuregwu mara mma iji jiri ụfụfụ na-atụgharị-n'eziokwu, ihe niile ị chọrọ bụ $ 15 na nwatakiri ima. Site na itinye nrụgide na ọnya ọnya, ịfụfụ ụfụfụ na-enyere aka ịhapụ nrụgide na nrụgide na akwara mgbe arụchara ọrụ ha. Nke a bụ otu esi eji igwe na-afụ ụfụfụ maka ihe kacha mma (gụọ: ọtụtụ ihe na-egbochi mgbu).
Foto RYERSONCLARK / GETTY
Dọ aka ná ntị: Onye a abụghị maka ndị obi na-adịghị ike.Ahụ dum cryotherapy (WBC)bu oyi emere ndi amara huru n’anya ( Jennifer Aniston, Daniel Craig na Jessica Alba , ịkpọ aha ole na ole). Site na okpomọkụ dị ala -270 degrees Fahrenheit, ndị na-akwado ya kwuru na ịbanye n'ime ụlọ dị jụụ maka nkeji ole na ole ga-eme ka mgbake dị ngwa, belata iwe ọkụ ma mee ka mgbasa gbasaa. Mana nyocha na WBC gwakọtara. Mgbe otu obere ọmụmụ German chọpụtara na ndị na-eme egwuregwu gbakere ngwa ngwa (ma rụọ ọrụ nke ọma) na ọgwụgwọ oyi, nyocha nke ọmụmụ anọ gara aga kwubiri na enweghi ihe akaebe zuru oke iji kwado iji WBC maka mgbu ahụ. Nhọrọ a bụ nke gị. (Ọ bụ na ị chọghị ịkwụ mmadụ ụgwọ ka ahụ jụọ gị oyi? Can nwere ike ị nweta ụdị mmetụta a site na ịbanye n'ime mmiri saa -nke a bụ ihe otu onye editọ chere mgbe ọ gbalịrị ya.)
Iji mee ka mgbu na ihe mgbu metụtara mmega ahụ, họrọa egwuregwu ịhịa aka n'ahụnke ahụ kapịrị ọnụ maka ndị nọ n'ọrụ. (Naanị n'uche na ọ nwere ike ọ gaghị eche ezi dị ka izu ike dị ka ebe ezumike dị okomoko, ebe ọ bụ na ịhịa aka egwuregwu na-elekwasị anya karị.)
mma Atụmatụ nke na-egbukepụ egbukepụ akpụkpọ arụrụ n'ụlọ
Na-arụ ọrụ Smart
Ọ bụrụ na ihe niile ị na-eme mgbe egbu egbu ọsụsọ na-akụ mmiri ozuzo ma na-ekele onwe gị na ọrụ ị na-arụ nke ọma, mgbe ahụ ị naghị eme ihe kachasị mma site na mgbatị gị-ma na-akpọ ndị na-esote ụbọchị mgbu. Site na ihi ura rue ajo ihe, leeasaa kasị ukwuu post-mgbatị-emehie iji zere, dị ka ndị ọkachamara.
Ndi mmadu ndi mmadu / nweta ihe onyonyo
KPỌRỌ AKW -KWỌ NA-EGO
Mgbe ị na-emeso mgbu post-mgbatị ahụ, ọ na-adọrọ adọrọ iru ibuprofen iji belata ihe mgbu. Ma mgbe NSAIDS na-ere ọgwụ (ọgwụ ndị na-adịghị egbochi ọgwụ mgbu dị ka ọgwụ aspirin na ibuprofen) nwere ike belata nhụjuanya, nyocha egosiwo na ọ nwere ike igbochi uru anụ ahụ ọ bụla gaara abịa site na mgbatị ahụ. (Lee ihe ị kwesịrị ịma banyere yaOTC meds na mgbatị mgbatị ahụ mgbu.)
Njikọ: Kacha mma na-arụ ọrụ maka ọdịmma onwe gị Ydị
6 lọ ọrụ Ndenye aha Babymụaka Ga-eweta nri na-edozi ahụ ụzọ gị n’ọnụ ụzọ
Fall’s Biggest Denim Trend * Ikekwe * Mee Ka to Bịa Ọsọ Mmiri Gị (Ọ dịkarịa ala otu ụbọchị)
Ihe ato kacha mma kachasi mma n’elu Amazon
Site na Babka ruo Macarons, Nke a bụ 13 nke klaasị Klaasị Kachasị Mma Online Ugbu a
'Sniper: Ghost Shooter' See Netflix's Top 10 Ndepụta (& Ọ dị ka iyi-Worth dị ka ọ na-ada)
Wzọ 9 eldị ọla ndị e si agbanwe agbanwe n’oge opupu ihe ubi a
12 Nnukwu Onyinye Maka Ndị Nne na Nna Ọhụrụ (Nke ahụ Ga-agba Ha Aka tochọ Babmụ Nwa Ọzọ)
Isi ihe ọzọ dị mkpa na mpụga Lindo Wing Pụtara Royal Baby No. 3 dị nso ebe a
Gịnị Kacha Mma Karịa Itinye Osisi Dị Ka Dọkịta Dọkịta Si Dị? Igwe Obere Osimiri
Nri kachasị mma ị ga-eri mgbe ị Dụbigara mmanya ókè ma dịkwa njikere ime ụfọdụ mkpebi
Kedu ihe kacha mma na-ahazi obere akpa? Lee ndị Top 8 anyị
Umu nkịta iri na atọ kachasị mma maka ndị nwe oge mbụ (na nke ụdị dị iche iche ga-ezere)
akụkọ kacha mma n'ịhụnanya na Hollywood
ọmarịcha foto nke ụwa
Kedu ihe ntụgharị uche chakra
kacha mma egwu nkiri niile oge
5 yoga asanas na uru ha
bekee movies 2016 ihunanya
kacha mma ihunanya fim niile oge Hollywood
2bọchị 2: FDCI x Lakme Ejiji Ejiji 2021
45 Ezi ntụziaka maka ụbọchị ọrụ nke ga-agwụ n'oge ọkọchị na ọkwa na-atọ ụtọ
Ihe nkiri 15 ị na-amabeghị na-adabere na Ezi Akụkọ
Nri Anyasị 17 N’okpuru Calories 500
Katy Perry nwere Nzaghachi dị ịtụnanya nye ndị na-atọ ọchị nke uwe uwe ya